ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Cialis, tadalafil .
မည်သို့လျင်မြန်စွာ Cialis အမှုန့်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်မည်သို့ Long ကဒါဟာ Cialis လျင်မြန်စွာအကျိုးသက်ရောက်ပုံမှန်အား 30 မိနစ်အတွင်းထိရောက်မှု၏စတင်ခြင်းနှင့်အတူပိုမိုလျင်မြန်စွာအခြား ED မူးယစ်ဆေးဝါးများထက်အကျိုးသက်ရောက်မှုယူလေ့ကြာရှည်ခံသည်။ နှင့် Levitra, အသုံးပြုသူများမူးယစ်ဆေး 30 မိနစ်ယူညွှန်ကြားနေစဉ်အဆိုပါထောက်ခံချက် [ ... ] ကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုမှ Cialis အမှုန့် 60 မိနစ်ယူရန်ဖြစ်ပါသည်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် Cialis, tadalafil နှင့် 1 မှတ်ချက် .
Cialis 20mg အလုပ်လုပ်ဘို့အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးယူပါသလဲ? Cialis ကဘာလဲ? လို့ခေါ်တဲ့မူးယစ်ဆေးများအတွက်ကုန်သွယ်မှုနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ Cialis PDE-5 (Phosphodiesterase type ကို 5) inhibitors အဖြစ်လူသိများမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်လူတန်းစားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ Cialis နှင့်အခြား PDE-5 inhibitors [ ... ] သ erectile တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (အထီးခွန်အားမရှိခြင်း) နဲ့ယောက်ျားကူညီပေးနိုင်ပါသည်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် စက်မှုပညာအတတ်ကို .
yohimbine ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘာလဲ? yohimbine ကဘာလဲ? Yohimbine ထုတ်ကုန်တစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ လည်းလူကြိုက်များကာယဗလ area.It အကြားတစ်ဦး aphrodisiac အဖြစ်နှစ်ပေါင်းရာချီအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးယောက်ျားရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်လာဖို့ erectile function.This ဝင်းတိုးတက်စေရန်ကူညီပေးသည်ဖြစ်သောသွေးကြော dilates နှင့်လိင်တံထဲမှာသွေးစီးဆင်းမှုတိုးပွါး ကျန်းမာရေးနှင့်တက်ကြွနှင့် [ ... ]
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် testosterone cypionate နှင့်2မှတ်ချက် .
ကာယဗလဧရိယာများတွင်တစ်ပူလည်းမရှိ - စအဆီဆုံးရှုံးမှုများနှင့်လိင် enhancing.People အတှကျအသုံးပွုကြွက်သားတည်ဆောက်အရိုးအားကောင်းလာစေရန်ကူညီပေးသောရောင်း Steroid တစ်မျိုး-testosterone Cypionate အမှုန့်, များသောအားဖြင့်အွန်လိုင်း stores.Meanwhile ထံမှ testosterone Cypionate ထုတ်ကုန်ကိုဝယ်ယူရန်ပိုမိုကာယဗလမယ်လေ့ [ ... ] ကျွန်တော်မျှဝေဖို့ဒီမှာပါခက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှု methods.Today ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အနိမ့်သောစျေးနှုန်း၏ steroids ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ဝယ်မပေး
ဥပဒေ steroids အမှုန့်: ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်တရားမဝင်
ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် steroids .
ဥပဒေ steroids အမှုန့်: ဥပဒေရေးရာသို့မဟုတ်တရားမဝင်ဟို steroids အမှုန့်ကိုလည်းဟို-အန်ဒရိုဂျင် steroids အမှုန့် (AAS) အဖြစ်ပိုပြီးစနစ်တကျမသိ, testosteroneas တူသောသဘာဝကအန်ဒရိုဂျင်အပြင်ဖွဲ့စည်းပုံဆက်စပ်ဖြစ်ကြပြီး tes tosterone အလားတူသက်ရောက်မှုရှိသည်သောဒြပ်အန်ဒရိုဂျင်ပါတီးရွိုက်အန်ဒရိုဂျင်တွေဟာ ။ သူတို့က [ ... ] ဟိုဖြစ်ကြပြီးအထူးသဖြင့်အရိုးကြွက်သားအတွက်ဆဲလ်အတွင်းပရိုတိန်းတိုးမြှင့်နှင့်လည်း